चीन अमेरिका सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान, सहयोग, संयुक्त हितमा रहने
चीनका प्रधानमन्त्री ली ख छ्याङ्गले चीनको अर्थतन्त्र अधोगतिमा जाने समस्या रहेको र धेरै जोखिम भएको कुरा स्वीकार गर्दै सबै जनाले हातमा हात मिलाएर चीनको आधारभूतआर्थिक स्थिति निरन्तर उन्नतिशील बनाउनसक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
चीनको आर्थिकस्थितिलाई उन्नतिशील बनाउनसकिने
बाह्रौँ राष्ट्रिय जन कंग्रेसको तेस्रो अधिवेशनसम्पन्न
यु चङ्ग शङ्गद्वारा चीनका मुख्य संचारगृहका प्रतिनिधिहरुसँग भेट
बेलायतद्वारा एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको सदस्य बन्न आवेदन
v नेपाली आर्थिक पत्रकार राजेन्द्र रिमाल- दुई अधिवेशनको शुभकामना
v चालु अधिवेशनलाई नेपालका रमेशकुमार भट्टराईको शुभकामना सन्देश
v सुन्दरनाथ भट्टराई-चीन अध्ययन केन्द्रका कार्यवाहक अध्यक्ष र पूर्व राजदूत
v नारायणमा बिजुक्छे- वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष
v सीआरआई श्रोता क्लबहरुको राष्ट्रिय परिषदका महासचिव दिपक नेपाल
बाह्रौँ राष्ट्रिय जन-कंग्रेसको तेस्रो सम्मेलनको तेस्रो पूर्ण बैठक
चीनद्बारा जातीय आदनप्रदानमा महत्व
v याँसी नदि आर्थिक क्षेत्र-长江经济带 v कानूनी शासन--法治
v अवकाश ग्रहण--退休 v दुई अधिवेशन--两会
v कर--税收 v सरकारी कार्य प्रतिवेदन--政府工作报告
v एक पेटी एक मार्ग--一带一路 v चिनियाँ जन राजन‍ैतिक परामर्शदात्री सम्मेलन--政协
"चीनका प्रधानमन्त्रीलाई मेरो प्रश्न"भन्ने इन्टर्नेट प्रश्न संलग्न कार्यक्रम
सन् 2015मा चीनका दुईवटा अधिवेशन सुरु हुन लागेको छ। चीनका प्रधानमन्त्री ली ख छ्याङले नयाँ सरकारको प्रतिनिधित्व गरी राष्ट्रिय जन कंग्रेसलाई सरकारको कार्य प्रतिवेदन सुनाउनुहुनेछ। साथै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी चीनको आन्तरिक तथा कुटनीतिक विषयसम्बन्धीचिनियाँ तथा विदेशी पत्रकारका प्रश्नको जवाफ पनि दिनुहुनेछ। विश्वलाई अचम्मलाग्दो चीनको अर्थतन्त्रको अरु विकास हुन सक्छ? वातावरण संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, सामजिक सुरक्षा, शिक्षा सन्तुलन आदि विभिन्न जन सरोकारका विषयमा चीन सरकारले के कस्तो कदम चल्न आवश्यक छ? अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा जिम्मेवार एक सदस्यको रुपमा चीनले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नेछ? सन् 2015मा चीनसम्बन्धी तपाईँलाई सबभन्दा रुची लागेको कुरा के हो?
सी आर आई नेपाली सेवाको वेभसाइटले "चीनका प्रधानमन्त्रीलाई मेरो प्रश्न" कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। तपाईंले आफ्नो प्रश्न तथा सुझाव र प्रतिक्रिया हाम्रो इमेलमा पठाउनुहोस्। nepali@cri.com.cn
चिनियाँ जन-राजनैतिक परामर्शदात्री सम्मेलनबारे
चिनियाँ जन-राजनैतिक परामर्शदात्री सम्मेलन चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको बहुपार्टी सहयोग तथा राजनैतिक परामर्शको महत्वपूर्ण संस्था हो जुन समाजवादी प्रजातन्त्रको प्रचार-प्रसार गरिने महत्वपूर्ण तरिका पनि हो। त्यस सम्मेलनले चीनको राजनैतिक जीवनमा नभईनहुने भूमिका निर्वाह गर्दछ। चिनियाँ जन-राजनैतिक परामर्शदात्री सम्मेलनमा राष्ट्रिय समिति तथा स्थानीय समिति छन।
चिनियाँ राष्ट्रिय जन-कांग्रेस व्यवस्था
चीनको सर्वोच्च राष्ट्रिय आधिकारिक संस्था---चिनियाँ राष्ट्रिय जन-कांग्रेसको वार्षिक सम्मेलन पाँच तारिखका दिन पेइचिंगमा शुरु भयो। चिनियाँ जनताको राजनीतिक जीवनमा यो ठूलो कुरा हो। चीनको संविधानअनुसार, मुलुकको सबै अधिकार जनतामा निहित हुन्छ। जनताले मुलुकको अधिकार प्रयोग गर्ने कार्यालय चिनियाँ राष्ट्रिय जन-कांग्रेस र क्षेत्रीय विभिन्न तहका जन-कांग्रेस हुन।